December 1, 2020 – Xorriya Online
Midowga musharaxiinta oo war adag kasoo saaray go’aankii dowladda ku cerisay safiirkii Kenya
Midowga Musharixiinta Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa war kasoo saaray go’aankii xukuumadda Soomaaliya hoos ugu dhigtay xiriirka dalka Kenya, iyagoo sheegay inay walaac xoog ka muujinayaan arrintan. Qoraal caawa kasoo baxya Golaha Midowga Musharixiinta ayaa lagu sheegay in go’aanka xukuumada u arkaan mid loo isticmaalayo olole doorasho ee aan loo xeerin danta Qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed. […]
Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in 51 Alshabaab ah lagu dilay dagaalkii Bacaadweyn
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maalin kadib war kasoo saartay dagaalkii qasaaraha badan dhaliyey ee Alshabaab shalay ku qaadeen degaanka Bacaadweyn ee Gobolka Mudug. Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu sheegay in dagaalka looga dilay Alshabaab 51 maleeshiyo, lagana qabtay lix (6), halka dadka degaanka laga dilay 10 qof, iyadoo lagu bogaadiyey dadka degaanka ee […]
Guddiyada doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka ee ay soo magacaabeen Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Dowlad-goboleeyada Koofur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo tababar mudooyinkii dambe uga socday magaaladda Muqdisho ayaa soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan waxyaabaha u qabsoomay mudooyinkii shirku u socday. Guddiga doorashooyinka waxay codsadeen in si degdeg loogu soo biiriyo xubnaha ka dhiman, ka […]
Maanta oo taariikhda ku beegan tahay 1-da December 2020 waxaa lagu waday in dowlad goboleedyada ay ka bilaabato doorashada xubnaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka, kaasoo ku caddaa jadwadlkii doorashada dadban ee ay ku heshiiyeen dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida muuqata qorshihii doorashada iyo jadwalkii la soo saaray 1-dii bishii October ayaa fashil ku […]
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabiley safiirka dalka Czech Republic u fadhiya Addis-ababa, Amb. Jaroslav Zukersein oo safar ku jooga Somaliland. Kulankaas waxa lagaga wada hadlay iskaashiga xiriir rasmi ah oo dhexmara Somaliland iyo Czech iyo sidii ay labada dhinac uga wada shaqayn lahaayeen horumarinta waxbarashada, gaar ahaan farsamada gacanta, […]
Shacabka magaalada Cabudwaaq oo dhigay bananbax lagu taageerayo ciidamada xasilinta deegankaas
Bartamaha Magaalada Cabudwaaq ayaa waxaa maanta lagu arkayay Shacabka Magaalada oo biyaha muwasaxada iyo agab kale u qaybinaya Ciidamada Xasilinta Cabudwaaq. Xalimo Farax Jamac oo ka mid ah Haweenkii Bananbaxa iyo taakulada Ciidamada Xasilinta ka qayb qadanayay ayaa sidan tiri. “Ka hor Ciidamada Xasilinta Magaalada way kala xirnayd wax dhaqdhaqaaq ahna ma jirin waan u […]
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo toogasho ku dilay nin qarax aasayey
Ciidamada ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Booliiska ayaa xalay saqdii-dhexe toogasho ku dilay nin la sheegay inuu miino ka aasayey xaafadda Nation-ka oo ka tirsan degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Wararka ayaa sheegaya in ninkaasi xilliga la tooganayey uu gacanta ku watay miino, islamarkaana uu damacsanaa inuu ku aaso Waaxda Horseed ee degmadaasi. Zeynab […]
Kenya oo ‘Qoomamo ka muujisay’ tallaabada Soomaaliya ay kusoo erisay safiirkeedii
Dowladda Kenya ayaa qoomamo ka muujisay tallaabada Somaaliya ay ugu yeertay safiirkeeda Nairobi isla markaana safiirkeeda Soomaaliya lagu war galiyey inuu dalkiisa wadatashi ugu laabto. “Dowladda Kenya waxay qoomamo qoto dheer ka muujineysaa tallaabada nasiib darrada ah ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya oo ka codsatay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbo in uu dib ugu […]
Kadib go’aankii xalay ka soo baxay madaxweynaha Puntland, Mduane Siciid Cabdullahi Maxamed Deni ee ahaa in canshuuraha deegaanada maamulkaasi lagu qaado lacagta Doller-ka Mareykanka ah ayaa waxaa arrintaasi ka dhalatay caro dadweyne iyo banaan-baxyo maanta ka billowday deegaanada Puntland. Wareegtada madaxweynaha ayaa kusoo beegantay xilli Puntland laga cabanayo sicir bararkii ugu xooganaa abid, iyadoo albaabada […]
Cilad ku timid diyaarad kusii jeeday Beledweyne oo ay la socdeen mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabelle
Diyaarad ay la socdeen wafdi uu hoggaaminayey Guddoomiyaha Barlamaanka Hirshabeelle ayaa cilad ku qabsatay hawada magaalada Beledweyne, taasoo keentay inay dib ugu laabato magaalada Muqdisho. Diyaaradda oo ka baxday garoonka magaalada Jowhar ayaa la sheegay in iyadoo u dhow Garoonka Beledweyne uu fariistay mid ka mida labadii matoor ee ay ku duuleysay, taasoo keenay inay […]